Soo dejisan XAMPP 5.6.24 – Vessoft
Soo dejisan XAMPP
XAMPP – software ah oo waxtar leh oo ka kooban MySQL, PHP, Perl iyo qalab kale oo badan oo waxtar leh. Waxyaabaha ugu weyn ee software-ka waa awood u leh inay si deg deg ah loo abuuro server a web buuxa oo degdeg ah oo ku saabsan computer ah. XAMPP ka mid ah tusaalooyinka ku qoran afafka barnaamijyada PHP iyo Perl, kaas oo awood u user in ay baadhaan functionalities, kuwaas oo loo ogaaday in luqadaha Barnaamijka. Software waxaa kaloo ku jira qaybo ka mid ah xisaab faahfaahsan booqashada tirakoobka ee Webalizer iyo FTP-macmiilka FileZilla.
Awoodda loo leeyahay in la abuuro server web a
Helitaanka baakadaha MySQL, PHP iyo Perl
XAMPP Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... IntelliJ IDEA 14.1.4 build 141.1532.4 Ultimate iyo Community
Horumarinta Tool si ay u tababaraan makiinada soonka on keyboard ah. Software ka kooban yahay qaabab ka duwan yihiin in loo qaybiyo casharada in la xasuusto khariidad muhiim ah.
العربية, English, Français, Español... IETester 0.5.5
English, Español, Deutsch, Italiano... Norton Ghost 15.0
العربية, English, Українська, Français... Dr.Web 11.0.0.11162